Minecraft but FREE! “Minecraft Earth” free-to-play မိုဘိုင်းဂိမ်းသစ် – Gaming Noodle
Minecraft but FREE! “Minecraft Earth” free-to-play မိုဘိုင်းဂိမ်းသစ်
Minecraft ဟာ ယခုချိန်ထိ လူသိများ အောင်မြင်နေဆဲ ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Google Play Store မှာ ဝယ်ယူကစားသူအများဆုံးဂိမ်းတစ်ခုပါ။ Mojang ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်တဲ့ ဒီဂိမ်းရဲ့ PC နဲ့ mobile version နှစ်ခုစလုံးဟာ အခကြေးငွေဖြင့် ဝယ်ယူမှ ကစားလို့ရခဲ့တာပါ။ “Minecraft Earth” ကို Minecraft ရဲ့ 10th anniversary ဖြစ်တဲ့ ဒီနှစ် မေလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ Mojang က free-to-play ထုတ်လုပ်မယ်လို့ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာတော့ beta version အတွက် sign up ကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်နေပါပြီ။
Android ရော iOS အတွက်ပါ ထုတ်လုပ်မယ့် ဒီဂိမ်းရဲ့ gameplay ကတော့ Minecraft နဲ့ ဆင်တူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Pokemon GO ဂိမ်းကဲ့သို့ Augmented reality (AR) ဂိမ်းအမျိုးအစားနဲ့ sandbox အမျိုးအစား ဖြစ်တဲ့အတွက် AR structure များကို အခြားသူများနဲ့ ပူးပေါင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဂိမ်းရဲ့မြေပုံတစ်လျှောက် tappables လို့ခေါ်တဲ့အရာများကို tap လုပ်ကာ resource များ စုဆောင်းခြင်း၊ Adventures စွန့်စားခန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း စတဲ့ gameplay များကို ကစားနိုင်မှာပါ။
Adventures မှာတော့ ကစားသူအတွက်ပေးထားတဲ့ task များကို ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပဟေဠိများကို ဖြေရှင်းခြင်း၊ နယ်မြေသစ်များကို ရှာဖွေကာ hostile entities များကို နှိမ်နင်းခြင်း စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ Adventures များကို ပြုလုပ်အောင်မြင်ပါက ကစားသူဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ reward တွေ ရရှိမှာပါ။ ဆောက်လုပ်ခြင်းများကို build plates လို့ အမည်တပ်ထားတဲ့နေရာများမှာ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ကစားသူများ အချင်းချင်း structure များရဲ့ပုံတူများကို မျှဝေယူနိုင်မှာပါ။
Minecraft Earth အတွင်းထည့်သွင်းထားတဲ့ မြေပုံကို OpenStreetMap ကနေ ယူထားတာဖြစ်ပြီး AR feature များအတွက်ကိုတော့ Microsoft Azure ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာပါ။ Minecraft Earth ဟာ တကယ်အပြင်မှာရှိတဲ့ သစ်ပင်များ၊ ရေကန်များ၊ အဆောက်အဦးများကို အလိုလျှောက်သိရှိမှာဖြစ်လို့ ထိုအရာများဟာ ဂိမ်းရဲ့ AR Simulation ကို အနှောင့်အယှက်မပေးနိုင်ပါဘူး။
Minecraft Earth ကို ကစားဖို့ Android7နဲ့ အထက်ဖြစ်စေ၊ iOS 10 နဲ့ အထက်ဖြစ်စေ ရှိဖို့တော့လိုအပ်မှာပါ။ Microsoft အကောင့်တစ်ခု သို့မဟုတ် Xbox live အကောင့်တစ်ခု ပြုလုပ်ဖို့လည်း လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး မိမိဆော့ထားတဲ့ ဂိမ်းအချက်အလက်များကို ယင်းအကောင့်မှ တစ်ဆင့်ထိန်းသိမ်းထားမှာပါ။
စမ်းသပ်ဆဲ Beta အဆင့်သာ ရှိသေးလို့ Google Play Store နဲ့ အခြားနေရာများမှာတော့ download ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ Beta အတွက် sign up ကို Minecraft Earth ရဲ့ official website မှာ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ကစားသူဦးရေ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ Beta version မှာ ဝင်ရောက်ကစားခွင့်ရသူတွေကတော့ free earth skin တစ်ခု ရရှိမှာပါ။
Mincraft Earth ဟာ Minecraft ရဲ့ ၁၀နှစ်တာ အတွေ့အကြုံများနဲ့အောင်မြင်မှုများနဲ့ အတွေ့အကြုံများပေါ် အခြေခံတည်ဆောက်ထားတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်လို့ တရားဝင်ထွက်ရှိချိန်မှာ လူအများကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ AR ဂိမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မိုဘိုင်းဂိမ်းသတင်းများနဲ့ အခြားသော esport သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
Minecraft but FREE! “Minecraft Earth” free-to-play မိုဘိုငျးဂိမျးသဈ
Minecraft ဟာ ယခုခြိနျထိ လူသိမြား အောငျမွငျနဆေဲ ဂိမျးတဈခုဖွဈပွီး Google Play Store မှာ ဝယျယူကစားသူအမြားဆုံးဂိမျးတဈခုပါ။ Mojang ကုမ်ပဏီက ထုတျလုပျတဲ့ ဒီဂိမျးရဲ့ PC နဲ့ mobile version နှဈခုစလုံးဟာ အခကွေးငှဖွေငျ့ ဝယျယူမှ ကစားလို့ရခဲ့တာပါ။ “Minecraft Earth” ကို Minecraft ရဲ့ 10th anniversary ဖွဈတဲ့ ဒီနှဈ မလေ ၁၇ ရကျနမှေ့ာ Mojang က free-to-play ထုတျလုပျမယျလို့ ကွငွောခဲ့ပါတယျ။ ယခုအခြိနျမှာတော့ beta version အတှကျ sign up ကိုလညျး ပွုလုပျနိုငျနပေါပွီ။
Android ရော iOS အတှကျပါ ထုတျလုပျမယျ့ ဒီဂိမျးရဲ့ gameplay ကတော့ Minecraft နဲ့ ဆငျတူမှာ ဖွဈပါတယျ။ Pokemon GO ဂိမျးကဲ့သို့ Augmented reality (AR) ဂိမျးအမြိုးအစားနဲ့ sandbox အမြိုးအစား ဖွဈတဲ့အတှကျ AR structure မြားကို အခွားသူမြားနဲ့ ပူးပေါငျးတညျဆောကျခွငျး၊ ဂိမျးရဲ့မွပေုံတဈလြှောကျ tappables လို့ချေါတဲ့အရာမြားကို tap လုပျကာ resource မြား စုဆောငျးခွငျး၊ Adventures စှနျ့စားခနျးမြား ပွုလုပျခွငျး စတဲ့ gameplay မြားကို ကစားနိုငျမှာပါ။
Adventures မှာတော့ ကစားသူအတှကျပေးထားတဲ့ task မြားကို ပွုလုပျခွငျး၊ ပဟဠေိမြားကို ဖွရှေငျးခွငျး၊ နယျမွသေဈမြားကို ရှာဖှကော hostile entities မြားကို နှိမျနငျးခွငျး စတာတှေ ပါဝငျပါတယျ။ Adventures မြားကို ပွုလုပျအောငျမွငျပါက ကစားသူဟာ သတျမှတျထားတဲ့ reward တှေ ရရှိမှာပါ။ ဆောကျလုပျခွငျးမြားကို build plates လို့ အမညျတပျထားတဲ့နရောမြားမှာ ပွုလုပျနိုငျပွီး ကစားသူမြား အခငျြးခငျြး structure မြားရဲ့ပုံတူမြားကို မြှဝယေူနိုငျမှာပါ။
Minecraft Earth အတှငျးထညျ့သှငျးထားတဲ့ မွပေုံကို OpenStreetMap ကနေ ယူထားတာဖွဈပွီး AR feature မြားအတှကျကိုတော့ Microsoft Azure ပျေါမှာတညျဆောကျထားတာပါ။ Minecraft Earth ဟာ တကယျအပွငျမှာရှိတဲ့ သဈပငျမြား၊ ရကေနျမြား၊ အဆောကျအဦးမြားကို အလိုလြှောကျသိရှိမှာဖွဈလို့ ထိုအရာမြားဟာ ဂိမျးရဲ့ AR Simulation ကို အနှောငျ့အယှကျမပေးနိုငျပါဘူး။
Minecraft Earth ကို ကစားဖို့ Android7နဲ့ အထကျဖွဈစေ၊ iOS 10 နဲ့ အထကျဖွဈစေ ရှိဖို့တော့လိုအပျမှာပါ။ Microsoft အကောငျ့တဈခု သို့မဟုတျ Xbox live အကောငျ့တဈခု ပွုလုပျဖို့လညျး လိုအပျမှာဖွဈပွီး မိမိဆော့ထားတဲ့ ဂိမျးအခကျြအလကျမြားကို ယငျးအကောငျ့မှ တဈဆငျ့ထိနျးသိမျးထားမှာပါ။
စမျးသပျဆဲ Beta အဆငျ့သာ ရှိသေးလို့ Google Play Store နဲ့ အခွားနရောမြားမှာတော့ download ပွုလုပျနိုငျခွငျးမရှိသေးပါဘူး။ Beta အတှကျ sign up ကို Minecraft Earth ရဲ့ official website မှာ ပွုလုပျနိုငျပွီး ကစားသူဦးရေ ကနျ့သတျထားပါတယျ။ Beta version မှာ ဝငျရောကျကစားခှငျ့ရသူတှကေတော့ free earth skin တဈခု ရရှိမှာပါ။
Mincraft Earth ဟာ Minecraft ရဲ့ ၁၀နှဈတာ အတှအေ့ကွုံမြားနဲ့အောငျမွငျမှုမြားနဲ့ အတှအေ့ကွုံမြားပျေါ အခွခေံတညျဆောကျထားတဲ့ဂိမျးတဈခုဖွဈလို့ တရားဝငျထှကျရှိခြိနျမှာ လူအမြားကွိုကျနှဈသကျတဲ့ AR ဂိမျးကောငျးတဈခုဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ မိုဘိုငျးဂိမျးသတငျးမြားနဲ့ အခွားသော esport သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျတငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။